Robert Mugabe, longtime Zimbabwe leader, dies at 95 - The Budget Report
FILE - In this Oct. 3, 2017 file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe during a meeting with South African President Jacob Zuma at the Presidential Guesthouse in Pretoria, South Africa. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Themba Hadebe, FILE)
FILE - In this Sunday, July, 29, 2018, file photo, Former Zimbabwean President Robert Mugabe, left, and his wife Grace pose for a photo after a press conference at their residence in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
FILE -- In this Friday, Nov. 17, 2017 file photo, Zimbabwe's President Robert Mugabe officiates at a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare, Zimbabwe. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Ben Curtis, File)
FILE - In this Saturday, Oct. 31, 2009, file photo Zimbabwe President Robert Mugabe arrives for the burial of a prominent member of his party, Misheck Chando, in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
FILE - In this Saturday, Dec, 17, 2016 file photo, Zimbabwean President Robert Mugabe addresses people at an event before the closure of his party's 16th Annual Peoples Conference in Masvingo, south of the capital Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
FILE - In this Wednesday, Nov. 10, 1976 file photo, leaders of the Black National Front Joshua Nkomo, left, and Robert Mugabe make a no progress statement after their informal meeting with British chairman Ivor Richard at the Palais of Nations, Geneva, Switzerland. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Dieter Endlicher, file)
FILE - In this Friday, Nov. 17, 2017 file photo Zimbabwe's President Robert Mugabe, center, arrives to preside over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare, Zimbabwe. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Ben Curtis, File)
FILE - In this Wednesday, May 22, 2013 file photo Zimbabwean President Robert Mugabe, left, shakes hands with Prime Minister Morgan Tsvangirai after he signed the new constitution into law at State house in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Robert Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi, File)
FILE - In this Wednesday, April 18, 2012 file photo Zimbabwe President Robert Mugabe, lights a flame at celebrations to mark 32 years of independence of Zimbabwe, in Harare. On Friday, Sept. 6, 2019, Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa said his predecessor Mugabe, age 95, has died. (AP Photo/File)
Many in South Africa remembered Mugabe for having stood up to the British.
Floyd Shivambu, deputy president of South Africa's far left Economic Freedom Fighters opposition party, wrote this tribute to Mugabe on Twitter: "You fought your battles, refused to bow down to imperialist bullies!"
Torchia reported from Johannesburg. AP writers Krista Mahr in Johannesburg, Carley Petesch in Dakar, Senegal contributed to this report.